“Waa akhbaartii ugu xumeyd.”. Pep Guardiola oo qiray inuu jab wayn ka soo gaaray kulankii ay xalay Man City ka adkaatay Watford – Gool FM
“Waa akhbaartii ugu xumeyd.”. Pep Guardiola oo qiray inuu jab wayn ka soo gaaray kulankii ay xalay Man City ka adkaatay Watford
(Manchester) 15 Dis 2016. Tababaraha reer Spain ee kooxda Man City Pep Guardiola ayaa qiray inuu jab ka soo gaaray kulankii xalay ay kooxdiisu ka aadkaatay Watford kaddib dhaawac daran oo soo gaaray kubbad qaabeeye Ilkay Gundogen.
Xiddiga reer Germany ayaa garoonka laga saaray qeybtii hore ee dheesha kaddib dhaawac ka gaaray Jilibka mar uu jilaafeeyay Nordin Amrabat.
Man City oo maalmahaanba jah wareersaneyd ayaa waxaa xaalada ku sii kordhinaya dhaawacan cusub taa oo keeneysa inay yaraato doorashada qadka dhexe ee kooxda.
Gundogen ayaa garoomada ka maqnaan doona mudda dheer sida uu qiray Guardiola xilli ay usbuuca soo socda Man City la ciyaari doonto Arsenal, waxaana xusid mudan in kooxda sidoo kale ay ganaaxyo uga maqan yihiin Fernandinho iyo Sergio Aguero.
“Waqti dheer ayuu maqnaan doonaa, tani waa akhbaartii ugu xumeyd.”. Guardiola ayaa sidaa yiri mar uu ka waramayay dhaawaca Ilkay Gundogen.
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Man United ka badisay Crystal Palace… (Muxuu ka dhignaa goolkii Ibrahimović?)